Taliban: “Turkiga waa in uu ka soo baxo walaaltinimada Islaamka” - Bulsho News
Taliban: "Turkiga waa in uu ka soo baxo walaaltinimada Islaamka"
Taliban: “Turkiga waa in uu ka soo baxo walaaltinimada Islaamka”
Afhyeen u hadlay Taliban oo lagu magacaabo Suhayl Shaheen ayaa sheegay in dalalka Afghaanistaan iyo Turkigu uu ka dhaxeeyo xiriir taariikhi ah isla markaana dowladda cusub ee Mullah Xasan Akhund ay doonayso in ay sii kordhiso iskaashiga kala dhaxeeta Turkiga.
Maxay Tahay cabsida Turkigu uu qabo
Madaxweyne Erdogan, ayaa falcelintiisii ugu horeysay ee dowladda cusub, ee Mullah Maxamed Xasan Akhund uu ka yahay raysal wasaaraha ku meel gaarka ah, waxaa uu su’aal galiyay inta ay sii jiri karto dowladdaas Taliban.
Erdoan ayaa sheegay in ay adag tahay in dowladda rasmi ah loogu yeero xukuumadda cusub ee Taliban.
Sidoo kale wuxuu sheegay in aanu garanynin inta ay sii jiri karaan golaha wasiirada ee ku meel gaarka ah, isaga oo intaa raaciyay in dowladiisa ay isha ku hayn doonto dhaqdhaqaayada cusub ee dowladda Taliban.
Horey ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga, Mevlut Chousolo, wuxuu u sheegay in aaney dowladiisu ku degdegi doonin aqoonsiga dowladda Taliban.
Sidoo kale wuxuu sheegay in xitaa aan loo baahneyn in caalamku ku degdego aqoonsiga dowladda ay ku dhawaaqday Taliban.
Xigashada Sawirka, @IEAOFFICE
Ra’iisul Wasaaraha Afghanistan ee Taliban magacaabeen, Mullah Xasan Akhund
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga wuxuu sheegay in loo baahanyahay hab-dheeli tiran ayna dowladiisu xaaladda ku qiimeyn doonto hadba waxa ay aragto.
Mevlut Chousolo ayaa yiri: “Waxaan rajeyneynaa in Afghanistan aysan geli doonin dagaal sokeeye”.
Wuxuu intaa ku daray in dowladda Turkigu ay kala hadleyso dalalka Mareykanka iyo Qadar arrimaha la xiriira gegida diyaaradaha Kabul.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Chousolo ayaa wareysi uu siiyay telefishanka NTV ee Turkiga ku sheegay in Turkigu uu si tartiib tartiib ah u horumarin doono xiriirka uu la leeyahay Taliban.Chousolo wuxuu sheegay in dowladda Afghanistan ay tahay inay noqoto mid loo dhan yahay. Waxaa kale oo uu sheegay in haddii ay noqoto dowladdu kaliya ee ka jirta Afghanistan Taliban in arrintaas dhibaato ka dhalan karto.Chousolo ayaa yiri: “Waxaa ka wanaagsan in Taliban ay dhisaan dowlad loo dhan yahay intii ay ka qeyb qaadan lahaayeen dagaal sokeeye”. Dawlad loo dhan yahay ayuu aqbali doonaa caalamka oo dhan. Haweenka Afgaanistaan waa in sidoo kale mas’uuliyad laga siiyo dowladda ayuu raaciyay hadalkiisa.
Turkiga ayaa xiriir taariikheed oo xooggan la leh Afgaanistaan. Turkiga ayaa ahaa dalka kaliya ee Muslim ah ee Afghanistan ay ka joogeen ciidamo qayb ka ahaa NATO.
Afghanistan: Ninkii hadda ka hor Joe Biden Khatarta...
McConnell seizes on debt standoff to undermine Biden...
Hong Kong at new start for development, to...
N.Korea joins race for new hypersonic missile with...
3 US-based economists win Nobel for research on...